Home Wararka C/karin iyo Sharif oo u ololaynaya musharaxii DFS, Axmad Qoor –Qoor! Maxa...
C/karin iyo Sharif oo u ololaynaya musharaxii DFS, Axmad Qoor –Qoor! Maxa is badalay?
Xildhibaanadii dhawaan la soo magacaabay Dowlad Goboleedka Galmudug ee garabka Dhusamareeb ayaa habeenadii u danbeeysay waxa ay teleefano codka ah ka helayeen Madaxweynihii hore ee dowladii ku meel-gaarka ahayd Mudane Shiikh Sharif iyo Madaxweynhii hore ee iska casilay DG Galmudug Cabdikarin Xuseen Guuleed. Madaxdaan ayaa qadka teelafanka kaga codsanayay xildhibanada cusub in ay codkooda siiyaan Axmad Qoor-Qoor.
Xildhibaanada garabka Dhuusamareeb oo ah dhalinyaro aan wax badan kala socon siyaasada Soomaaliya ayaa waxa yaab ku noqday taleefanada Joogtada ah ay ka helayaan madaxdii hore kuwaas oo si an gabasho laahynin ugu ololaynaya Musharaxii ay wateen Farnaajo iy Kheyre.
Mid ka mid Xildhibanada cusub ayaa sheegay in ay ku noqotay fajac iyo yaab in Shiikh Sharif Shiikh Axmad u ololeeynayo musharaxii uu watay Maxamad Cabdullahi Farmaajo iyo Xasan Kheyre. “Cabdikarin Guuleed waaba ku tuhmaynay in uu u shaqeeyo Fahad Yasin, laakiin waxa isku keey qaba’la in Shiikh Sharif uu taageero musharixii dowlada Fedaraalka, mar ayaanba is iri Shiikh Sharif waxa uu ku biiray Dowlada Fedraalka” ayuu yiri xildhibaankas oo ka gaabsaday in aan magaciisa fafino.
Waxaa dad badan is weydiinyaan in Madashii dhawaan la’aas’aasay ee madasha xisbiyada Qaran lagu kala tagay maadaama ay xubnihii ka tirsanaa madashada ay kala taaageerayaan labo musharaxiin oo iska soo horjeedo. Xisbiga UPD ayaa waxa uu wataa Cabdiraxmaan Odowaa halka Xisbiga Himilo Qaran uu wato Axmad Qoor Qoor.
Qaar ka mida holwadeenii xisbiga Himilo Qaran oo uu ku jiro Cabdiqadir Cali Cumar ayaa si buuxda ula shaqeeynaya gudiga ololaha Axmad Qoor-Qoor. Mar la waydiiyay Shiikh Sharif sababta uu ugu ololaynayo Qoor Qoor ayuu yiri “ Qoor Qoor anig ayuu ila shaqayn doonaa mar hadii la doorto.. Farmaajo been baa loo aqrinayaa hada ” . Hadalka ka soo yeeray Shiikh Sharif ayaa lagu tilmaamay hadal ka fog xaqiiqda una eg in uu marmarsiyo ka dhiganayo, waxaana jira shaki ah in isaga iyo Farmaajo xiriir hoose ka dhaxeeyo.
Cabdullahi Sanbaloolshe oo ka tirsan gudiga dhexe ee xisbiga UPD ayaa isaga oo xanaaqsan yiri ” .. wadaadkaas xun oo beenlowga ah, ilaahna aan ka baqin waa ogaa in uu shirqool u dhigayo madasha, laakiin hogaanka madasha ayaana ay u taalaa talabadii ay ka qaadi lahayd, hadiise aniga talo la i waydiinayo waa in sida Farmaajo loo dagaalaa, waa qof beec ah oo hadii aad lacag u balan qaado aad meeshii aad rabtid u kaxaysan kartid sidii xoolaha “.